Kyaw Hein, Author at Chelmo News Portal - Page 14 of 17
Home›Author: Kyaw Hein (Page 14)
Idolတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာ မလွယ်ပါဘူး။ အဆင့်ဆင့်နဲ့ အခက်အခဲများစွာကို ဖြတ်ကျော်ပြီး အခုလိုအောင်မြင်မှုတွေရရှိအောင် အများကြီးကြိုးစားခဲ့ရတာပါ။ သူတို့ရဲ့အောင်မြင်မှုတွေနဲ့အတူ သူတို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကရော ဘယ်လောက်ရှိမလဲဆိုတာ ကြည့်လိုက်ရအောင်နော်။ 29. Jin BTS ထဲက Jinက ပိုင်ဆိုင်မှု $8.5 Million ရှိပါတယ်။ 28. V BTS ထဲက V ကလည်း ...
ငယ်ငယ်ကဆို မြဝတီမှာ ကိုရီးယားကားပြမယ့်အချိန်ကို ထိုင်စောင့်ခဲ့ဖူးပါသလား? အချိန်တွေကြာသွားပေမယ့် ပြန်ကြည့်တိုင်းရိုးမသွားတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွေရှိကြပါတယ်။ ပြန်မကြည့်ဖြစ်ရင်တောင် Posterလေးမြင်တာနဲ့ ဘာကားဆိုတာသိပြီး ဒီကားကြည့်ပြီး ဘယ်လိုငိုခဲ့ရတာဆိုတဲ့ Feeling မျိုးကိုရစေပါတယ်။ အဲ့ကားတွေက ဘာတွေဖြစ်မလဲဆိုတာ ကြည့်လိုက်ရအောင်နော်။ (၁) Autumn In My Heart ဆောင်းဦးရွက်ကြွေ ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ မြန်မာပရိတ်သတ်တွေ ရင်ထဲရောက်ခဲ့တဲ့ ...
ကိုရီးယား ဇာတ်လမ်းတွဲတွေမှာ ဖြစ်လေ့ရှိတဲ့ ဇာတ်ညွှန်းများကတော့
Stay Home ဆိုနေတော့ A သွေးအမျိုးတွေ အိမ်မှာဘာတွေလုပ်နေကြသလဲဆိုတာကို ကြည့်လိုက်ရအောင်လား။ ၀၁. တအိမ်လုံး သန့်ရှင်းရေး။ ပုံမှန်ဆိုရင် ကိုယ်နဲ့ဆိုင်တဲ့နေရာတွေကိုပဲ သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပင်မယ့်လည်း အိမ်မှာနေရတဲ့အချိန်တွေများလာတော့ တအိမ်လုံးကို သန့်ရှင်းရေးလုပ်တော့တာပါပဲ။ ၀၂. ပိုပြီးကပ်စေးနဲလာသည်။ A သွေးအမျိုးတွေက ပိုက်ဆံကိုလည်း တိတိကျကျသုံးတတ်သူပါ။ ဒီလိုအချိန်မှာ ဘယ်လို ပိုက်ဆံကို ချွေတာသုံးရမလဲဆိုတာကို ...